Somalia: Safiirkii Maraykanka ee Soomaaliya oo iscasilay [Warbixin]
Home Somali News South and Central Somalia: Safiirkii Maraykanka ee Soomaaliya oo iscasilay
Bedelaadda safiirka ayaa ka danbaysay ka dib markii ay cadaatay in warbixinadii uu ka diri jiray waxqabadka Madaxweyne Farmaajo iyo Xukuumadiisa uu hogaamiye Kheyre ay noqdeen kuwo waaqaca ka fog.
Safiirka iyo diblomaasiyiinta kale ee Safaarada ayaa isku dhacay, ka dib markii la isku qabsaday gudbinta dhabta iyo waaqaca saxda ah ee Soomaaliya.
Ugu horayn waxaa isku dhacay Safiirka iyo ku xigeenkiisii Russ Schiebel, laakiin Safiirka ayaa ku guuleystay in uu bedelo ku xigeenkiisa.
Lubnah Khan oo ahayd haweenayda madaxda ka ah xafiiska siyaasada ee safaarada ayey mar kale isku dhaceen Safiirka, laakiin dacwad mudo socotay ayaa ugu danbayntii labadoodiiba la bedelay.
Bedel Ambasador Stephen Schwartz ayaa dharbaaxo wayn ku noqon doona Madaxweyne Farmaajo oo ay isku Magaalo degenaayeen Ambassador Stephen Schwartz.
Ambasador Stephen ayaa caan ku ahaa buun buuninta waxqabadka Dawlada uu hogaamiyo Madaxweyne, iyadoo inta badan safiirada Beesha Caalamka ay xanta ka qarsan jireen Ambasador Schwartz, madaama la ogaa in isaga iyo Farmaajo ay ka wada yimaadeen magaalada Buffalo ee Gobolka New York.
Ambasador Stephen Schwartz, ayaa lagu wadaa in uu dhowaan xilka ku wareejiyo ku xigeen kiisa Martin Dale, sagootiyana Madaxda Soomaaliya. Martin ayaa ahaa doona ku simaha iyo sii hayaha xilka Safaarada.
May rumoobin Riyadeydii Xalay! Qeybtii Labaad
Mohamed - September 16, 2018
Mugdi yar ayaa jira, oo salaadii Subax ayaa laga soo baxay,...
Maxaadan Ogeyn oo ka jira Baydhabo & Kismaayo ?